यो हो आलिया भट्टलाई मनपर्ने सेक्स आसन ! - Everest Dainik - News from Nepal
बलिउड स्टारहरु अक्सर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा त्यति धेरै खुलस्त हुँदैनन् । र सम्भव भएसम्म व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका विषयमा गुपचुप नै राख्न मनपराउँछन् । अझै कसैसँग प्रेमसम्बन्धमा छन् भने त झनै खुल्दैनन् । उसलाई केवल साथीका रुपमा चिनाउँछन् ।
यधपि, नयाँ पुस्ताका कलाकारहरु यो पराम्परालाई तोड्दैछन् । उनीहरु आफ्नो निजी जीवनका बारेमा पनि खुलेर कुरा गर्छन् । जस मध्य एक हुन अहिलेकी चर्चित नायिका आलिया भट्ट। बलिउड इन्डष्ट्रीमा छोटो र कम उमेरमा सफल हुने भाग्यशाली कलाकार हुने आलिया भट्ट र उनको व्यक्तिगत जीवन पनि एकदमै विन्दास छ ।
उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका सवालमा विना कुनै हिच्किचावट सजिलै खुलस्त रुपमा उत्तर दिने हैसियत राख्छिन् । आलिया भट्टले भर्खरै एउटा म्यागेजिनलाई लामो अन्तर्वार्ता दिएकी छन् ।
उक्त अन्तर्वार्तामा आलियाले आफ्नो निजी जीवनका बारेमा कयौं खुलासा गरेकी छन् । अन्तर्वार्तामा उनले केटो साथी (प्रेमी) देखि लिएर आफूहरुबीचका सम्बन्धका गोप्य कुरा खुलेर बताइन । अन्तर्वार्ताका क्रममा आलियालाई प्रश्न गरियो यदि तपाईको प्रेमीले आफ्नो मोवाइल अनलक छोडेर गए सबैभन्दा पहिला तपाई के कुरा हेर्नुहुन्छ ? आलियाले यस्तो जवाफ दिइन, ‘मलाई मेरो प्रेमीको फोनको पासवर्ड थाहा छ ।’ यस्को मतलब अहिले उनी एक्लै छैनन् । उनको केटो साथी (प्रेमी ) छ । तर उनले प्रेमीका बारेमा भने कुनै कुरा बताइनन् ।
याे पनि पढ्नुस आलिया र उनकी आमा सोनी राजदान भारतीय होइनन्’
८० भन्दा बढी पुरुषसँग सेक्स !
यौन सम्पर्क गर्दा लिङ्ग नै योनिभित्र अड्किएपछि…
२३ वर्षीया आलिया भट्टसँग शारीरिक निकटता (सेक्स) भएपछि तपाईलाई कुन सेक्स आसन (पोजिसन) मन पर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले विन्दास तरीकाले खुलेर उत्तर दिइन् । आलियाले इन्टिमेसीका दौरान ‘क्लासिक मिशनरी’ (पुरुषमाथि महिला तल) पोजिशन (आसन) खुबै मन पर्ने बताइन । उनले यसलाई अझै व्याख्या गर्दै भनिन् ‘किनकी म एक साधारण मानिस हुँ ।’
अन्तर्वार्तामा आलियाले आफ्नो बेडरूमसँग जोडिएका कतिपय गोप्य कुरा पनि खुलस्त रुपमा शेयर गरिन । आलियाले पुरुषप्रति आफ्नो धारणा पनि उक्त अवसरमा बताइन । पृथ्वीमा सबै परेर एउटा ५० वर्षका र अर्को १८ वर्षको दुईजना पुरुष मात्रै बाँचे भने मैले त्यही ५० वर्षको पुरुषलाई रोज्ने छु अन्तर्वार्तामा आलियाले भनिन् ।
१८ वर्षे युवासँग आफूले लामो समयमा विताउन नसक्ने आलियाको भनाइ छ । आलियाको यो भनाइबाट पुष्टी हुन्छ कि उनी परिपक्क मान्छे मन पराउछिन् ।
ट्याग्स: Aalia bhatt